Mavara Iyi Stumbras 'Classic vodka yekuunganidza inomutsidzira yekare Lithuanian vodka kugadzira tsika. Dhizaini inogadzira yekare chigadzirwa chigadzirwa padyo uye inoenderana nemazuva ano mutengi. Iyo yegirazi yegirazi yegirazi, misi yakakosha ku Lithuania vodka kugadzira, ngano dzakavakirwa pachokwadi, uye dzinonakidza, dzinobata ziso - iyo nzira yakatemwa-yakatemwa-nzira inoyeuchidza nezvemifananidzo yekare, iyo yakatemwa bara iri pasi iyo inopedzisa iyo yekirasi symmetrical composition, uye mafonti uye mavara anozivisa kuzivikanwa kwe-sub-brand yega-yese inoita kuti yetsika yevodka kuunganidze isashande uye inonakidza.
Khalenda Isu tinovaka mataundi nemi. Iyo meseji iyo NTT East Japan Corporate Sales kukurudzira kuburitsa inoonekwa mune ino desiki khalenda. Icho chikamu chepamusoro chekarenda mashizha akachekwa kunze kwezvivakwa zvine mavara uye mapepa akafukidza anoumba rimwe guta rinofara. Iyo khalenda iyo imwe inogona kunakidzwa nekushandura nzvimbo yeiyo mutsara wezvivakwa mwedzi wega wega uye inozadza iwe nemanzwiro kuti ugare uchifara gore rose kuburikidza.
Kalendari Iyi yekarenda yedesiki yakagadzirwa neyakagadziriswa-kunze dhizaini rine mwaka pamafss emafaro embossing. Iko kunongedza kwekugadzirwa kwacho kana ichinge yaratidzwa, mwaka mwaka motifs dzakaiswa pakona ye30 madhigiri kuti ataridze zvakanaka. Iyi fomu nyowani inoratidza iyo NTT COMWARE's novel flair yekugadzira mazano matsva. Mufungo unopihwa kune kuita kwekarenda nekukwana nzvimbo yekunyora uye mitsetse inotongwa. Izvo zvakanaka kutaridzika nekukurumidza uye nyore kushandisa, brimming neiyo yekutanga iyo inoisa iyo kunze kwemamwe makarenda.
Guruva Uye Mutsvairo
Guruva Uye Mutsvairo Ropo ndeyokuzvienzanisa neguruva uye mutsvairo pfungwa, isingambowira pasi. Nekuda kwehuremu hushoma hwetangi remvura iri mune yepazasi komupururu, Ropo inozvichengetedza yakasarudzika. Mushure mekutsvaira guruva nekubatsirwa nemuromo wakananga weguruva, vashandisi vanogona kubvarura mutsvairo neguruva pamwe chete nekuriisa kure seyuniti imwe pasina kushushikana kuti inombowira pasi. Iyo yemazuva ano organic fomu inotarisira kuunza hunyoro kunzvimbo dzepakati uye dombo rinoregedzera risingazununguki rinotarisira kufadza vashandisi pavanenge vachichenesa pasi.
Label Yewaini Dhizaini ye "5 Elemente" ndiyo mhedzisiro yepurojekiti, apo mutengi akavimba iyo yekugadzira dhizaina nerusununguko ruzere rwekutaura. Iko kunongedza kwechimiro ichi chiRoma chimiro "V", chinoratidza pfungwa huru yechigadzirwa - mhando shanu dzewaini dzakadzvanywa musanganiswa yakasarudzika. Iyo yakakosha pepa rinoshandiswa kune iyo label pamwe nekugadzika kwekuisa kwezvinhu zvese zvakajeka zvinomutsidzira mutengi anogona kutora bhodhoro uye kuripuruzvira mumaoko avo, achiibata, iro rinoita fungidziro yakadzama uye rinopa dhizaini yacho isingakanganwike.
Mavara Khalenda Kalendari Guruva Uye Mutsvairo Label Yewaini Kuputira Zvokunwa Zvakapfava